स्तन निकै ठूलो भएका कारण काम पाईन – अमेरिकी मोडल एमिली – Todays Nepal
स्तन निकै ठूलो भएका कारण काम पाईन – अमेरिकी मोडल एमिली
अमेरिकी मोडल एमिली रटजकोस्कीले आफ्नो ‘सेक्सी इमेज’ का कारण अन्य महिलाले उनीसँग काम गर्न अस्विकार गरेको बताएकी छिन्। रबिन थिकको विवादित भिडियो ट्रेक ब्लर्ड लाइन्समा नृत्य गरेपछि २७ वर्षीया एमिली चर्चामा आएकी थिइन्। एमिलीले हार्पर्स बाजार अष्ट्रेलियासँग आफूसँग कुनै काम नभएको बताएकी छिन्। आफू अत्यधिक सेक्सी भएका कारण आफूसँग काम नभएको उनको धारणा छ। यो महिला विरोधी सोचजस्तै भएको एमिलीले बताएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘मानिसहरु मसँग काम गर्न चाहँदैनन् किनभने मेरो स्तन निकै ठूलो छ।’
एमिलीले भनिन्, ‘मेरो स्तनसँग के समस्या छ ? यो महिलाको शरिरको एउटा सुन्दर हिस्सा हो जसका कारण हामी खुसी हुनुपर्छ। यसको पर्वाह कसले गर्छ ? स्तन निकै ठूलो वा सानो भएको विषयलाई किन बहस बनाउनुपर्यो ?’ पछिल्लो वर्ष एमिली र किम कार्दासियनको एक सेल्फी सार्वजनिक भएको थियो। उक्त सेल्फीमा दुबै बाथरुममा टपलेस थिए । एमिलीले आफ्नो उक्त सेल्फीको बचाउ पनि गरेकी थिइन्।
एमिलीले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो शरिर कामुक हुनसक्छ। एक महिलाको रुपमा यो कुराको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ कि उनले कति कामुकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ।’ एमिली ‘गन गर्ल’ र ‘आन्टुराश’ फिल्ममा पनि देखिएकी थिइन्। उनी हलिउडमा करियर बनाउन चाहन्छिन् तर आफ्नो स्वरुपको आधारमा होइन। एमिलीका अनुसार उनीबारे जति पनि प्रोफाइल लेखियो ती सबैमा उनी निक्कै सेक्सी भएको बताइएको छ। आफूलाई सेक्स सिम्बोलको रुपमा पेश गरिएको उनको धारणा छ। एमिलीका अनुसार कोही सेक्सी हुनु आफैंमा सेक्सिस्ट हो। पछिल्लो वर्ष एमिलीको नग्न तस्बिर उनको अनुमती बिना सार्वजनिक भएको थियो।
कामुक ‘सेक्स डल’ ले जापानमा बिहेदर घटाउदै
अशिष्माले गरिन् विवाह ! श्रीमान लजाउदा, भावुक भइन् अशिष्मा